FBC - Gahee Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itiyoo-telekoom gariin gurguruuf kan murtaa’e hanqina sharafa alaa furuufi
Gahee Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itiyoo-telekoom gariin gurguruuf kan murtaa’e hanqina sharafa alaa furuufi
Finfinnee, Waxabajjii 5, 2010 (FBC) Mootummaan gahee Daandii Qilleensaa Itiyoophiyaa fi Itiyoo-telekoom gariin gurguruuf kan murteesse kaampaanonni kunniin hanqina sharafa alaa mudate furuuf kan gargaaran ta’uunsaanii itti-amanamee akka ta’e Koomishiniin Pilaanii Biyyaalessaa beeksise.
Daldalli alaa biyyattii waggoota darbanitti kan karoorfamuun gadi ta’uunsaa, piroojaktoonni gudguddoo fi dhaabbileen misoomaa oomishuutti kan hin-seenne ta’uun, fedhiin oomishaalee galii baay’ee dabaluun fi liqaan alaa dabaluun hanqina sharafa alaa ittumaa akka hammeesse koomishinichi ibseera.
Biyyattiin waggoota 2 dhufan keessatti baasii boba’aaf, meeshaalee bu’uuraaf, damee dhuunfaa fi invastimantiif barbaachisu keessaa raawwii piroojaktoota durii fi liqaa alaa deebisuuf qofa sharafa alaa Doolaara biliyoona 13 ishee barbaachisa. Rakkoo kanaaf furmaata ta’ee kan argame ammoo gahee dhaabbilee misoomaa, tajaajilaa fi oomishaa biyyattii gara dhuunfaatti dabarsuu yookiin gurguruu akka ta’e koomishinarichi Doktar Yinnaagar Dasee himaniiru.
Dhaabbileen misoomaa filataman kunniin qorannoon kan irratti geggeffame yoo ta’u, sharafa alaa olaanaa rakkoo kana furuu dandeessisu nifidu jedhamee kan itti-amaname ta’uu eeraniiru.
Waggoota dheeraaf biyyattiin oomisha alaa galuuf Doolaara biliyoona 17 kan baastu ta’us, galiin daldala alaa ishee Doolaara Ameerikaa biliyoona 3 ol ta’uu hafuunsaa dinagdeen tasgabbaa’aa akka hin-taane godheera.
Doktar Yinnaagar akka ibsanitti dhaabbilee kanneen gariin dhuunfaaf dabarsuun humna sharafa alaa biyyattii cimsuu fi furmaata yeroo gabaabaaf malee furmaata yeroo dheeraa ta’uu kan hin-dandeenyedha.
Rakkoo kanaafis gama mootummaan daldala alaa furmaata waaraa ta’u guddisuuf tumsuu fi hojjachuu ta’uu ibsaniiru. Dabalataanis qonna hammayyeessuu, oomishaa fi oomishtummaa guddisuu, industiriiwwan oomishaa guddisuu fi humna isaanii guutuun akka oomishan dandeessisuu akkasumas ce’umsa dinagdee saffisiisuu akka barbaachisu ibsaniiru.
Sharafa alaa argamu qisaasinaaf kan saaxilan daldala seeraan alaa fi gabaa doolaara gurraachaa hanbisuu akka barbaachisus himaniiru.
Koomishinarri Doktar Yinnaagar kaampaanota karoora galii isaaniif yaadame akka milkeessaniif gahee gariinii bitan irratti qorannoon akka geggeffamus himaniiru. Qorannichi kaampaanota biyya keessaa fi alaa gahee abbummaa gariinis ta’e guutumaan guutuutti bituuf fedhii qaban irratti akka geggeffamu ibsaniiru. Qorannoon kun of-eeggannoo qaamoleen dhaabbilee gariinis ta’e guutumaan guutuutti bitan kisaaraa irra kan nama hin-buusne, hawaasa irratti dhiibbaa mi’aa’ina jireenyaa kan hin-uumne ta’uusaanii mirkaneessuuf kan raawwatamu akka ta'e ibsaniiru.
Biyyattiin murtoo kana kan murteessite sharafa alaa argachuuf waan ta’eef, kaampaanota alaaf dursi akka kennamus himaniiru.
Oduuwwan Biroo « Ijaarsi Ganda Industiri Gogaa Moojoo waggaa shanii ol booddeetti hafe jalqabamuuf jedha	Zooniin Industirii Bahaa Itiyoophiyaa ijaarsa boqonnaa lammataa jalqabuuf jedha »